Makuphele ukuxhatshazwa kwabasebenzi kwiidyunivesiti - Amanda.mobi Setswana
Makuphele ukuxhatshazwa kwabasebenzi kwiidyunivesiti
Ukuxhatshazwa nokombiwa eqolo kwabazali bethu, yinto eqhubekekayo ngokunge-nasini. Okukuhlukunyezwa kwabazali bethu kwandile kumaziko emfundo ephakamileyo-dyunivesiti zelilizwe lethu. Abantu bakuthu basebenza kanzima – bekhesela ubomi babo bonke, bebhatalwa umvuzo ophantsi, umvuzo ongenasidima, maxesha wambi baphelelwe ngumsebenzi, kuba basebenza phantsi kwemeko ezingakhuselekanga.
Lomkhuba wokuqeshwa kwabasebenzi ziikampani zabucala, ukutsho oko ileybha brokhas, zizo ezibangela abasebenzi bangabinamalungelo, bakhesele ixesha elide, uxhaphake kubasebenzi abangomantshingilana, abasebenza emakhitshini, abaqhubi kwakunye nabo basebenza emabaleni. Abasebenzi abaqeshwe ngontamo likhuni, abantamo likhuni bathi babenesivumelwano nedyunivesithi, baqesha abasebenzi, ze bona bababhatale amantongomane, umvuzo ophantsi kakhulu.
Umbutho wabafuni, Rhodes Must Fall Movement, benza ikhwelo lokuba abasebenzi mabaqeshwe ziidyunivesithi, abanomgogwana, boontamo likhuni, ama leyibha brokha, apheliswe nya, kunjalonje abasebenzi babhatalwe umvuzo osemgangathweni, ozakuthi ubuyisele isidima sabasebenzi. Ngamanyala enyoka kwii-dyunivesithi zethu ibe kanti zisabhatala abasebenzi umvuzo wobukhoboka, odala ukuba abasebenzi bahlupheke.
Sihlaba iikhwelo kwii nqununu, amalungu ebhunga ongamele ezidyunivesithi, abaxhasi ngokwezimali kwakunye nabaphathi, sithi kubo;
Ezidyunivesithi zoluntu, zinendima ekufuneka ziyidlalile ekutshintsheni isimo sengcinezelo yabantu bakuthi, imo yokuxhatshazwa kwabasebenzi. Kufuneka zikhokele phambili ekufundiseni abafundi ngesimo sezombamgazwe, ubuhlanga, isini, imeko yezomnotho ethi ibophelele abasebezi kwimeko yobuhlwempu, kwakunye nezembali ezinefuthe kwingcinezelo.
Kufuneka siyilwe nya nimeko ye leybha brokhas, amasishini abucala, athi abenesivumelwano nedyunivesithi zethu, kuba lamashinini abucala, axutha amalungelo abasebenzi, abanze amakhesela ubomi babo bonke. Zingekabhangiswa ileybha brokhas, nawaphina amalinge okutshintsha ezidyunivesiti zethi ayakuwa phantsi, de silwisane, sizibhangise ezilybha brokhas. Sitshintshe ezidyunivesiti zethu, ibezidyunivesiti zoluntu, zingabiliphawu lengcinezelo.
Inguqu epheleleyo emele ubu-afrika iyakuthi ibonakale xa sizibhangise neengcambu ezileybha brokhas, ukuhlukunyezwa kwabasebenzi kwakunye nokubhatalwa umvuzo ongenasidima. Sibanga ukuba iinguqi zezidyinivesiti bayibezinguqu ezimele ubu-afrika poqo, ezisiseko sazo ikukubuyisela isidima sabasebenzi
Sisonke simele ubulungisa
U Rhodes Makawe UCT Left Students’ Forum Wits students; UCT NEHAWU, October6 Wits, October6 University of Johannesburg and the Black Students Movement at the university currently known as 'Rhodes'.